ကုရုမဟာ - ရှ Achaemenid မင်းဆက်တည်ထောင်သူ
by NS Gill ရဲ့ရှေး / Classical သမိုင်းဝေါဟာရ
အဆိုပါအသက်တာ, မိသားစု, နှင့်ကုရု၏ခြှနျသောမဟာ
အမည်: ကုရု (ရှနျအဟောငျး: Kuruš; ဟေဗြဲ: ကော)
ရက်စွဲများ: က c ။ 600 - က c ။ 530 ဘီစီ
မိဘများ: Cambyses ငါနှင့် Mandane
ကုရုမဟာ၏တည်ထောင်သူခဲ့ Achaemenid မင်းဆက် (ဂ။ 550-330 ဘီစီ), ပု၏ပထမဦးဆုံးဧကရာဇ်မင်းဆက် ပါရှန်းအင်ပါယာ နဲ့မဟာအလက်ဇန္ဒား၏ရှေ့တော်၌ထိုကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအင်ပါယာ။ အဆိုပါ Achaemenid အမှန်တကယ်တစ်မိသားစုမင်းဆက်ခဲ့သလား ဒါဟာသူ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားဝင်မှုပေးရန်အလို့ငှာ, တတိယအဓိက Achaemenid အုပ်စိုးသောမင်းဒါရိမင်းကြီးကုရုဖို့သူ၏ဆကျဆံရေးကိုတီထွင်တာဖြစ်နိုင်တယ်။
အနောက်တောင်ပိုင်းရှားနှင့်ဗဟိုပြုသောမင်းတို့ - သို့သော်အင်ပါယာ၏ရာစုနှစ်နှစ်ခု '' ကျိုးနပ်၏အရေးပါမှုလျော့ပါဘူး ပိုတေးမီးယား အဘယ်သူ၏နယ်မြေကိုဂရိနိုင်ငံအနေဖြင့်ရန်လူသိများကမ္ဘာကြီးသရုပ်ဆောင်, Indus Valley ကို အောက်ပိုင်းအဲဂုတ္တုပြည်တောင်ဘက်တိုးချဲ့။
Anshan ၏ကုရု II ကိုဘုရင်က (ဒီတစ်ခါလည်း)
ဂရိ "သမိုင်း၏ဖခင်" ဟီရိုဒိုးတပ် ကုရု II ကိုပြောပါတယ်ဘယ်တော့မှမဟာတစ်ဦးတော်ဝင်ရှမိသားစုမှ လာ. မဟုတ်ဘဲသူလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းဖြင့် related ခဲ့သည်ဘယ်သူကိုရန်, မေဒိမှတဆင့်တန်ခိုးတော်အားဝယ်ယူကြောင်း။ ပညာရှင်များဟီရိုဒိုးတပ်ပါရှဆြေးြေိံးသည့်အခါအလံသတိထားပင်ဟီရိုဒိုးတပ်ပဍိပက္ခကုရုပုံပြင်များဖျောပွထားသူကုရုဟာအထက်တန်းလွှာ, ဒါပေမယ့်မတော်ဝင်မိသားစု၏ခဲ့တာကြောင့်ညာဘက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ချီလွှဲပေမယ့် အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကုရု Anshan ၏စတုတ္ထမင်းကြီးသည် (ခေတ်မီ Malyan) ဖြစ်, ဒုတိယညျရှငျဘုရငျရှိကုရုကြပေမည်။ သူက 559 ဘီစီရှား၏အုပျဖွစျလာတဲ့အခါမိမိအ status ကိုရှင်းလင်း
Anshan, ဖြစ်နိုင်သည်တစ် Mesopotamian အမည်, အကြား, အ Marv Dasht လွင်ပြင်၌ Parsa (အနောက်တောင်ပိုင်းအီရန်အတွက်ခေတ်သစ် Fars) တစ်ဦးပါရှနိုငျငံတျောသညျခဲ့ Persepolis နှင့် Pasargadae ။
ဒါဟာအာရှုရိလူများ၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ခဲ့ပြီးတော့မီဒီယာများ၏ထိန်းချုပ်မှု * အောက်တွင်ရှိခဲ့ကြပေမည်။ Young ကဒီနိုငျငံတျောသညျအင်ပါယာရဲ့ start သည်အထိရှားအဖြစ်လူသိများမခံခဲ့ရကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
ပါရှန်း၏ကုရု II ကိုဘုရင်ကမေဒိမာ,
အကြောင်းကို 550 ခုနှစ်, ကုရုဟာအလယ်အလတ်မင်းကြီးသည် Astyages (သို့မဟုတ် Ishtumegu) ရှုံးနိမ့်, သူ့ကိုအကျဉ်းသားကို ယူ. , Ecbatana မှာမိမိမြို့တော်လုယက်, ပြီးတော့မီဒီယာ၏နန်းထိုင်၏။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ကုရုရှနှင့်မေဒိအီရန်-related အမျိုးအနွယ်နှင့်မေဒိပါဝါကျင်းပခဲ့သောကျော်နိုင်ငံပေါင်းနှစ်ဦးစလုံးကျော်အာဏာကိုရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါအလယ်အလတ်မြေများ၏အတိုင်းအတာအဖြစ်ဝေးအရှေ့ခေတ်သစ်တီဟီရန်အဖြစ် သွား. အနောက်ဘက်၌လုဒိ၏နယ်စပ်မှာ Halys မြစ်ခြင်းငှါ၎င်း, Cappadocia ယခုကုရုရဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဤဖြစ်ရပ်သည်ပထမဦးဆုံးကုမ္ပဏီ Achaemenid သမိုင်းထဲမှာဖော်ပြထားပြီးသောအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်များ၏သုံးခုအဓိကအကောင့်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။
ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်၏အိပ်မက်အတွက်, ဘုရားမာဒှတျ Astyages ဆန့်ကျင်အောင်မြင်စွာချီတက်ရန်, ကုရု, Anshan ရှင်ဘုရင်စေပါတယ်။
အများဆုံး laconic ဗားရှင်း [Astyages] ရေတွက် [မိမိတပ်] နှင့်ကုရုဆန့်ကျင်ချီတက် "ကဤသို့ဆိုပြီးသောဗာဗုလုန် Chronicle 7.11.3-4, Anshan ၏ [II ကို] ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တော်သိမျးပိုကျဘို့ ... စစ်တပ်က Astyages ပုန်ကန်သူဖြစ်ခဲ့သည် ယူအကျဉ်းသား။ "
ဟီရိုဒိုးတပ် '' ဗားရှင်းမတူပေမယ့် Astyages နေဆဲသစ္စာဖောက်ဖြစ်ပါတယ် - ဤအချိန်, Astyages တစ်စွပ်ပြုတ်များတွင်မိမိသားတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောတစ်ဦးသောသူအားဖြင့်။
Astyages may သို့မဟုတ်ရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ Anshan ဆန့်ကျင်ချီတက်သူပါရှန်းနှင့်အတူစာနာခဲ့ကြသောမိမိကိုယ်ပိုင်ယောက်ျားသစ္စာဖောက်ကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
ကုရုလုဒိနှင့် Croesus '' စည်းစိမ်ဥစ္စာရရှိသည်
မိမိစည်းစိမ်ဥစ္စာဘို့အကျော်ကြားအဖြစ်ကဤသည်အခြားကျော်ကြားသောအမည်များ: Midas, Solon, Aesop နှင့် Thales, Croesus (595 ဘီစီ - က c ။
546 ဘီစီ) သာဒိမှာယင်း၏မြို့တော်နှင့်တကွ, Halys မြစ်၏အာရှမိုင်းနားအနောက်ဘက်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့လုဒိ, စိုးစံလေ၏။ သူကထိန်းချုပ်ထားခြင်းနှင့် Ionia အတွက်ဂရိမြို့မြို့တို့မှအခွန်ဆက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ 547 ခုနှစ်, Croesus အဆိုပါ Halys ကူး Cappadocia ထဲသို့ဝင်သောအခါ, သူကုရု '' ပိုင်နက်အပေါ် encroached ခဲ့ကြောင်းနှင့်စစ်စတင်အကြောင်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
ချီတက်နှင့်အနေအထားသို့ရတဲ့သုံးစွဲလအတွင်းပြီးနောက်, ရှင်ဘုရင်နှစ်ပါးတို့သည်ဖြစ်ကောင်းနိုဝင်ဘာလအတွက်ကနဦး, အပြီးအပြတ်ကောက်စစ်တိုက်စစ်တိုက်ကြ၏။ ထိုအခါ Croesus, စစ်တိုက်ခြင်းငှါရာသီကျော်ဖြစ်ခဲ့သည်ယူဆဆောင်းတွင်းရပ်ကွက်သို့မိမိအတပ်ဖွဲ့များစေလွှတ်ခဲ့သည်။ ကုရုမရကိုပြု၏။ အဲဒီအစားသူသာဒိဖို့ကြရပြီ။ Croesus အကြားက 'ဒိတိုက်ပွဲဆုံးရှုံးဖို့ခဲ့ကြသည်, နံပါတ်များနှင့်ကုရုအသုံးပြုတဲ့လှည့်ကွက်ကုန်ခမ်း။ အဆိုပါဒိ Croesus ကသူ့မဟာမိတ်များသည်သူ၏အကူအညီမှလာနိုင်တော့တဲ့အထိတစ်ဦးဝိုင်းထားခြင်းကိုထွက်စောင့်ဆိုင်းရန်ရည်ရွယ်ရှိရာနန်းတော်မှပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရသည်။ ကုရုကွံကြီးနှင့်ဒါသူသည်နန်းတော်ချိုးဖောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကုရုထို့နောက် Lydian အဘိဓါန်ညျရှငျဘုရငျနှငျ့သူ၏ဘဏ္ဍာကိုသိမ်းယူခဲ့သည်။
ဤသည်ကိုလည်း Lydian အဘိဓါန်ဂရိသည်ကျွန်မြို့ကြီးများကိုကျော်တန်ခိုး၌ကုရုပျထားလေ၏။ ရှရှင်ဘုရင်နှင့် Ionian ဟေလသလူတို့အကြားဆက်ဆံရေးတင်းမာနေခဲ့သညျ။
ထိုနှစ်တွင်ပင်ခုနှစ်တွင် (547) ကုရု Urartu သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူသည်ဟီရိုဒိုးတပ်သည်နှင့်အညီ, Bactria သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်ချိန်, သူသိပြည်, Drangiana,-Aria, Chorasmia, Bactria, Sogdiana, Gandara, ဆစျသီယာ, Sattagydia, Arachosia နှင့် Maka သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။
နောက်တစ်နေ့အရေးကြီးသောလူသိများတစ်နှစ်ကုရုသိမ်းပိုက်သောအခါ 539 ဖြစ်ပါတယ် ဗာဗုလုန်မြို့ ။ သူကအသိအမှတ်ပြု မာဒှတျ (ဗာဗုလုန်မြို့သားမှ) နှင့်ထာဝရဘုရားသညျ (ယုဒလူတို့အားသူပြည်ပရောက်ထံမှလွတ်မြောက်မည်ဟုအဘယ်သူကို), လက်ျာခေါင်းဆောင်အဖြစ်သူ့ကိုရွေးချယ်ရာတွင်ဘို့, ပရိသတ်အတွက်ပေါ် မူတည်. ။
ဘုရားသခငျ့ရွေးချယ်ရေး၏ပြောဆိုချက်ကို corvee လုပ်အားနှင့်ထို့ထက် ပို. အဖြစ်ကိုလူများ အသုံးပြု. စွပ်စွဲသူတို့၏အထက်တန်းလွှာနှင့်မင်းကြီးသည်ဆန့်ကျင်ဗာဗုလုန်မြို့သားကိုဖွင့်ဖို့ကုရု '' ဝါဒဖြန့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရှငျဘုရငျ Nabonidus တစ်ဇာတိဗာဗုလုန်ခဲ့ပေမယ့်တစ်ခါလဒဲနှင့်ထက်ပိုဆိုးသည်ဘာသာရေးထုံးတမ်းဖျော်ဖြေဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့ဘူး။ သူဟာမြောက်ဘက်အာရေဗျ Teima မှာနထေိုနေစဉ်ဦးရစ်သရဖူမင်းသား၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာချပြီးအသုံးပြုပုံဗာဗုလုန်မြို့ငယ်ခဲ့သည်။ Nabonidus နှင့်ကုရု၏တပ်ဖွဲ့များအကြားထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုအောက်တိုဘာလအတွက် Opis မှာတဦးတည်းစစ်တိုက်ရာတွင်ရာအရပျကိုယူ။ အောက်တိုဘာလအလယ်အသုံးပြုပုံဗာဗုလုန်မြို့နှင့်၎င်း၏ညျရှငျဘုရငျယူခဲ့သညျ။
ကုရု '' အင်ပါယာယခုပိုတေးမီးယား, ဆီးရီးယားနှင့်ပါလက်စတိုင်းတို့ပါဝင်သည်။ ယင်းဘာသာရေးထုံးတမ်းမှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်သေချာစေရန်, ကုရုဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်အဖြစ်သူ့သား Cambyses installed ။ ဖြစ်နိုင်ပါက satrapies အဖြစ်လူသိများခံရဖို့ 23 ကွဲပြားခြင်းသို့အင်ပါယာကိုခှဲဝေသောသူသည်ကုရုဖြစ်ခဲ့သည်။
သူက 530 ခုနှစ်တွင်မသေဆုံးမီသူနောက်ထပ်အဖွဲ့အစည်းကိုပြည့်စုံကြပေမည်။
ကုရုသူတို့ရဲ့စစ်သည်တော်မိဖုရား Tomyris ကျော်ကြား (ခေတ်သစ်ကာဇက်စတန်မှာ) ခြေသလုံး Massegatae နဲ့ပဋိပက္ခ, စဉ်အတွင်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ကုရု II နှင့်ဒါရိမင်းကြီးများ၏ဝါဒဖွနျ့၏မှတ်တမ်း
ကုရု၏အရေးကြီးမှတ်တမ်းများမဟာဗာဗုလုန် (Nabonidus) Chronicle (ချိန်းတွေ့ဘို့အသုံးဝင်သော), အကုရုစလင်ဒါနှင့်ဟီရိုဒိုးတပ်များ၏သမိုင်း၌ထင်ရှား။ တချို့ကပညာရှင်များဒါရိမင်းကြီးမဟာ Pasargadae မှာကုရု '' သင်္ချိုင်းပေါ်တွင်ကမ္ပည်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဤသည်ကမ္ပည်းတစ်ခု Achaemenid သူ့ကိုရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ဒါရိမင်းကြီးမဟာပု Achmaenids ၏ဒုတိယအရေးအပါဆုံးကိုအစိုးရသောမင်းကြီးနှင့်ကကျနော်တို့မှာအားလုံးကုရု၏သိသောကုရုကိုရည်မှတ်သည်သူ၏ဝါဒဖြန့်သည်။ ဒါရိမင်းကြီးမဟာတစ်ခုအယောင်ဆောင်သို့မဟုတ်နှောင်းပိုင်းရှငျဘုရငျသ Cambyses II ကို၏ညီဖြစ်ခဲ့ကြပေမည်သူတစ်ဦးအခြို့သောရှငျဘုရငျဂေါတမ / Smerdis ဖြုတ်ချ။ ဒါဟာဂေါတမ (Cambyses အဲဂုတ္တုပြည်မှထွက် setting မီ, သူ့အစ်ကို, Smerdis ဦးသေဆုံးခဲ့ကြသောကြောင့်,) တစ်ခုအယောင်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့်လည်းရာဇပလ္လင်အဘို့မိမိအလေလံ back up လုပ်ထားဖို့တစ်တော်ဝင်နွယ်တောင်းဆိုကြောင်းဖော်ပြမှသာဒါရိမင်းကြီး '' ရည်ရွယ်ချက်များကိုက်ညီ။ လူများဒဏ်ငွေရှငျဘုရငျအဖွစျကုရုကြီးစွာသောလေးစားခြင်းနှင့်အာဏာရှင်ဆန်တဲ့ Cambyses နေဖြင့်အပေါ်သို့ထားခံစားခဲ့ရဖူးနေစဉ်, ဒါရိမင်းကြီးသည်သူ၏နွယ်၏မေးခွန်းကိုလုပ်ကြံခေါ်ခဲ့သည်ဘယ်တော့မှ "ဟုအဆိုပါစျေးဆိုင်ပိုင်ရှင်။ "
ဒါရိမင်းကြီးရဲ့ကြည့်ရှုပါ Behistun သတ်မှတ်ခြင်း သူသည်မိမိမြင့်မြတ်သောမိဘအခိုင်အမာသော။
K. Kris Hirst နှင့် NS Gill အားဖြင့်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်
နောဖပြည်၌အတွက် Depuydt L. 1995 လူသတ်မှု: အ Apis Bull ၏ Cambyses ရဲ့ Mortal ဒဏ်ရာများ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ ( Ca. 523 ဘီစီ) ။ 119-126: အနီးအရှေ့လေ့လာရေး 54 (2) ၏ဂျာနယ်။
Dusinberre ERM ။ 2013 ခုနှစ်အင်ပါယာ, အာဏာပိုင်နှင့် Achaemenid Anatolia အတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်။ ကိန်းဘရစ်ချ်: ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကနှိပ်ပါ။
ဂျေ 1996 Lendering [နောက်ဆုံး 2015 အချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်] ။ ကုရုမဟာ။ Livius.org ။ [ဇူလိုင် 2016 02 ဝင်ရောက်]
Munson RV ။ 2009 ခုနှစ်ဟီရိုဒိုးတပ် '' ပါရှသူကားအဘယ်သူဖြစ်ပါသလား အဆိုပါနျ Classical ကမ္ဘာ့ဖလား 102 (4): 457-470 ။
Young က J ကို, T. Cuyler 1988 ဒေိနှင့်ပါရှန်း၏အစောပိုင်းသမိုင်းနှင့် Cambyses အသေခံဖို့ Achaemenid အင်ပါယာ
အဆိုပါကင်းဘရစ်ရှေးသမိုင်း။ ခုနှစ်တွင်: Boardman J ကို, Hammond ဟာ NGL, Lewis က DM နှင့် Ostwald M က, အယ်ဒီတာများ။ အဆိုပါကင်းဘရစ်ရှေးသမိုင်း Volume ကို 4: ရှား, ဂရိနှင့်အနောက်တိုင်းမြေထဲပင်လယ်, 479 ဘီစီမှ c525 ။ ကိန်းဘရစ်ချ်: ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကနှိပ်ပါ။
ရေကိုအမ် 2004 ကုရုနှင့် Achaemenids ။ အီရန် 42: 91-102 ။
ခေတ်သစ်အိုလံပစ်ပွဲတော်၏တည်ထောင်သူ, Pierre de Coubertin
အဆိုပါ Ashikaga ရှိုးဂန်း
အဆိုပါ Amazing ရှောင်လင်ဘုန်းကြီးများ၏ဓါတ်ပုံများ
တူညီသည့်အအမေရိကန်ဖန်းဖော်ထုတ်ရန် - အဆိုပါဗိုလ်မှူးဖန်းမျိုးစိတ်သစ်
ဟောငျး GRE စာမေးပွဲနှင့် GRE အထွေထွေစမ်းသပ်မှုအကြားတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်
Rouler - Roll တွင်; Drive သို့
စစ်ရာဇဝတ်မှုအကြောင်းထိပ်တန်း 10 အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်
ဤရွေ့ကားက Nicolas ကေ့လက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှုဝင်းကအင်တာနက်
Lysander အဆိုပါ Spartan အထွေထွေ
Isadora Duncan က Quotes
ထိပ်တန်း ESL, Conversation သင်ခန်းစာများစီမံကိန်းများကို
တစ်ဦးလွတ်လပ်သော Variable ဆိုတာဘာလဲ
Serial Killer Debra ဘရောင်း၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို
အီတလီကူညီကြိယာ: Potere, Volere, ဒိုဗာ
ထိပ်တန်း 10 အကောင်းဆုံး Bolt ကလှုပ်ရှားမှုမင် / Big Game ကအမဲလိုက်ရိုင်ဖယ်